अरेबियन महिलाहरु किन यती सुन्दर र का’मुक हुन्छन् ? यस्तो छ रहस्य ! - NepalTrending
गुलाबजलले छाला बिग्रनबाट बचाउनुको साथै छाला चाउरीनबाट बचाउँछ । गुलाबजललाई जमाएर आईस क्युब बनाएर अनुहार र गर्दनको वरिपरी रगड्नु पर्छ ! उनीहरु आँखाको मेकअप गर्न निकै रुचाउँछन् । त्यसैले गाजल यिनीहरुलाई अत्यन्त पि्रय लाग्छ । आँखाको सुन्दरता बढाउनका लागि अरेबियन महिलाहरु घरमा बनेको गाजल लगाउने गर्छन् । अरेबियन महिलाहरु हलावा नामक घरमा बनेका व्याक्सको प्रयोग गर्छन् । यिनीहरुलाई अनावश्यक रौं आएको मन पराउँदैनन् ।
खाना नमिठो भएको भन्दै भएको भन्दै विवाहमा झगडा, दुलही नलिएरै फर्के जन्ती